आईओएस iOS मा आईओएस Rec को उपस्थिति पुन: प्राप्त गर्नुहोस् विन्टरबोर्ड (साइडिया) लाई धन्यवाद आईफोन समाचार
यी शब्दहरूको माथि तपाईले देख्नुहुने दुईवटा छवि मध्ये कुन चाहानुहुन्छ? के तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले आईओएस look को हेराईको लागि हेर्न चाहानुहुन्छ र यसको आइकनहरू र विवरणहरू पूर्ण छन्? राम्रो जेलब्रेक को लागी धन्यवाद तपाईले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ Cydia मा पहिले नै उपलब्ध थिमहरू छन् जुन तपाइँलाई तपाइँको स्प्रिboardबोर्डको उपस्थिति परिवर्तन गर्न अनुमति दिईन्छ समयमै फिर्ता जाँदा र यसलाई iOS को अघिल्लो संस्करणहरूसँग छोड्दै। हामी यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने चरण-चरणमा व्याख्या गर्दछौं.
स्पष्टतया सिडिआ हुनु आवश्यक छ, जसका लागि जेलब्रोकन हुनु आवश्यक छ। अहिलेको लागि, र मोबाइल सब्सट्रेट devices 64-बिट प्रोसेसर (आईफोन s एस, आईप्याड एयर र आईप्याड मिनी) को साथ नयाँ उपकरणहरूमा अद्यावधिक नभएसम्म तिनीहरूलाई त्यसो गर्न सम्भव हुने छैन। बाँकी उपकरणहरूको साथ, तपाईं तल निर्देशनहरू निर्देशनहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो याद गर्नुहोस् यदि यो तपाइँको लागि काम गर्दैन भने, यो सम्भावना मोबाइल सब्सट्रेटको गल्ती हो, हामीले यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर पहिले नै वर्णन गरिसक्यौं.
Cydia खोल्नुहोस् र "आईओएस Theme थिम (आईओएस))" प्याकेजको लागि हेर्नुहोस्। यसलाई स्थापना गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले पहिले आफ्नो उपकरणमा विन्टरबोर्ड स्थापना गर्नुभएको छैन भने, यो स्वचालित रूपमा स्थापनामा थपिनेछ। प्रक्रियाको अन्त्यमा तपाईंले उपकरण पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
एकपटक पुन: शुरू गरेपछि, नयाँ मेनू सेटिंग्समा देखा पर्नेछ, विन्टरबोर्ड भनिन्छ (स्प्रिboardबोर्डमा आइकनका साथै)। यसको भित्र, "थिमहरू चयन गर्नुहोस्" मा तपाईले भर्खर स्थापना गर्नुभएको विषयवस्तु छान्न सक्नुहुन्छ। बाँकी थिमहरू जुन विन्टरबोर्डमा पूर्व-स्थापित आउँछन्। एक पटक छनौट भएपछि, «Respring on मा क्लिक गर्नुहोस्। र हामी हाम्रो स्क्रीन सामान्य फिर्ता को लागि कुर्दै छौं। तब तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी आइकनहरूको देखावट आईओएस like मा जस्तै परिवर्तन भएको छ। यस समयमा केवल क्यालेन्डरका आईकनहरू र किओस्क एप्लिकेसन आईओएस in मा रहन्छ।
अवश्य पनि, मेनूहरू अझै आईओएस in मा जस्तै छन् यो केवल "फेसलिफ्ट" हो तर धेरैलाई यो पक्कै मनपर्दछ। यस शैलीको कुनै पनि अन्य विषय जुन तपाईलाई साइडियामा थाहा छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » आईओएस iOS मा आईओएस Winter को लुक पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् विन्टरबोर्ड (साइडिया) लाई धन्यवाद
कार्लोस सान्ताना सानचेज भन्यो
आईओएस to मा सर्नुको एक राम्रो कारण (आईओएस of को इन्टरफेसको बारेमा गुनासो गर्ने र आईओएस on मा रहिरहेकाहरूको लागि) ^^
कार्लोस सन्ताना सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, म iOS7लाई माया गर्दछु
म पनि, तर यो सत्य हो कि अरुहरू कुरूप थिएनन्, तिनीहरू अति परिष्कृत र यथार्थपरित थिए, मलाई दुबै मन पर्छ (यद्यपि म आईओएस prefer लाई प्राथमिकता दिन्छु)
अलेजेन्ड्रो भेलास्क्वेज भन्यो
क्यामेरा आइकन आईओएस for को लागि राम्रो छ, मलाई लाग्छ, with को साथ एक मलाई स्केच जस्तो देखिन्छ मैले यसलाई बाहिर निकाल्नु भन्दा आधा घण्टा पहिले ... मलाई फोटोहरू सहितको एक ios6 सँगको भन्दा अलि बढी मनपर्दछ, बाँकी मलाई कुनै आपत्ति छैन
अलेजेन्ड्रो Velquesquez लाई जवाफ दिनुहोस्
iPhone 5C भन्यो
केवल आईकनहरू बदल्नुहोस्, यो एक qu हो
आईफोन C सीमा जवाफ दिनुहोस्
मैले iOS6 लाई मिति सकिसकेको छु! मैले iOS7 को प्रयोग गरिसकें र यो भय looks्कर देखिन्छ।
Fuck! तपाईं A7 प्रोसेसरहरूको लागि मोबाइल सब्सट्रेट अपडेट गर्न के चाहनुहुन्छ? के कसैलाई थाहा छ जब यो अधिक वा कम हुन्छ?
हामी उही हो!
पूर्ण सहमत। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् तर विन्टरबोर्ड? आधा पावरको साथ हामीले चीनको लागि ब्याट्री परिवर्तन गर्यौं।
र विन्टरबोर्ड बिना?
मैले त्यो स्थापित गरें र जब मैले मेरो आईफोन रिबुट गरें तब मैले डाउनलोड गरेको अनुप्रयोगहरूका आइकनहरू थिएनन, केवल पूर्वनिर्धारितहरू (सन्देशहरू, फोटोहरू, क्यामेरा, आदि) र प्रयोग सेटिंग्समा मैले पाएँ कि ती हड्डीहरूको स्थानमा छन्। अझै पनी छन्, र आईफाइल नामहरू देखा पर्दछन् र एप्सस्टोरमा मैले यो पाउँदिन, र समय, क्यालकुलेटर, मेल र सफारी खोल्दैनन् उनीहरूले मलाई तुरून्त बाहिर लैजान्छ, म के गर्न सक्छु हिजोदेखि म त्यो समस्याको साथमा छु
के यसको मतलब हिउँदबोर्ड आईओएस with को साथ पहिले नै उपयुक्त छ?
नागाटोलाई जवाफ दिनुहोस्
कसैलाई थाहा छ कसरी iOS6 को स्लोपबाट iOS7 मा फर्कने?
GB२ जीबी आईपड।
उनीहरूले मलाई भन्छन् कि म एक परिवर्तनको लागि एक एपल स्टोरमा जान सक्छु तर म मेक्सिको सिटीमा बस्छु र यहाँ मात्र लेखक डीलरहरू छन्।
"परिवर्तन" को साथ यो हो कि म iOS6 मा डाउनग्रेड चाहन्छु, के यो सम्भव छ?
A_l_o_n_s_o_MX लाई जवाफ दिनुहोस्
होईन, तपाईं सक्नुहुन्न किनकि श्यासले अब डाउनग्रेड गर्न सक्दैन, तपाईंले अपडेट गर्नु अघि सोच्नुपर्दछ किनभने अहिले तपाई यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न, अभिवादन 😀
मोशालाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, अब मैले आईपड टचमा राखेको छु .6.1.5.१..7, जुन पछिल्लो हो जुन जाँदैछ, यसलाई आईओएस look जस्तो देखिने बनाउनु हो, बिल्कुल विपरीत।
यो मेरो लागि काम गर्दैन, कसैलाई किन थाहा छ?
फ्रान्कीलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको डक को उपस्थिति परिमार्जन गर्नुहोस् Cydia को लागी धन्यवाद